सन्दिप एक्लैले लिए ५ विकेट, मलेसियालाई आठौं झड्का ! [LIVE] – Everest Dainik – News from Nepal
सन्दिप एक्लैले लिए ५ विकेट, मलेसियालाई आठौं झड्का ! [LIVE]
सन्दिपले बिस्फोटाक ब्याट्म्यान मोहम्मद सरफिलाई ४९ रनमा आउट गरेका छन् । योसँगै मलेसियालाई आठौं झड्का लागेको छ । सातौं विकेटका रुपमा पारस खड्काको बलमा मलेसियाका खेलाडी रन आउट भएका छन् । यसअघि सोमपाल कामीले लगातार २ विकेट लिएका थिए ।